Olee otú Play MKV Files na Apple TV na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
Olee otú Play MKV Files na Apple TV na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
u 2. akwado Formats
MKV yiri na tụụrụ ime ọzọ multimedia containers dị ka AVI, MP4 ma ọ bụ MOV. Ọ bụ ihe na-agbanwe na mkpakọ na-emekarị sụgharịa na a nta size na otu àgwà video / ọdịyo mmepụta, karịsịa n'ihi na HD videos. Great-edu fim na-esiwanye hụrụ a napụtara n'elu internet site MKV usoro. Otú ọ dị, ọ bụ ihe mwute na ọtụtụ na-ewu ewu ngwaọrụ enweghị n'anya maka inye nkwado maka nke a format, gụnyere Apple TV.
E nwere dịkarịa ala 2 abụọ abụọ na-egwu MKV on Apple TV:
Part One - Stream MKV ka Apple TV kpọmkwem na-enweghị akakabarede na Wondershare Media Server
Part Abụọ - tọghata MKV ka Apple TV na-akwado formats na mgbe nyefee Apple TV
Part One Otú ka iyi MKV ka Apple TV na Wondershare Media Server
1. Ebe ọ bụ Wondershare Media Server bụ bụ naanị tinye-na na maka Wondershare Video Converter Ultimate, ị kwesịrị ị download Wondershare Video Converter Ultimate mbụ.
2. Mgbe arụnyere, e nwere ga-2 akara ngosi dị na desktọpụ, pịa Media Server, nke anya dị ka Wi-Fi akara ngosi.
3. Ugboro abụọ click ẹkedori ya na mgbe ahụ, ị ​​ga-abịa interface dị ka ndị na, ihe niile na-akwado ngwaọrụ gụnyere Apple TV ga-ahụrụ na-akpaghị aka na ala. Biko mara na ngwaọrụ gị niile - PC na Media Server, Apple TV na nnukwu ihuenyo kwesịrị n'okpuru otu internet ma jide n'aka na ha niile na-arụ ọrụ nke ọma na ọhụrụ software.
4. Pịa "Import" mbubata MKV faịlụ i chọrọ enuba Apple TV, ịhọrọ akwado ngwaọrụ dị ka Apple TV. Mgbe ahụ faịlụ niile ga-egosi dị ka ndị na, mgbe aga òké n'elu, ị ga-ahụ Wi-Fi na akara ngosi na-egosi na onye ọ bụla faịlụ. Pịa Wi-Fi akara ngosi na "Play na TV."
5. Mgbe pịa bọtịnụ, a ga-enwe mmapụta window, nke ga-ime njikwa n'ihi na gị nnukwu ihuenyo. Na gị MKV videos ga-egosi na TV ozugbo. Biko mara na ị na-apụghị ịhụchalụ video utịp ke PC na Media Server ugbu a.
Ọ bụrụ na ị ga-esi a di na nwunye nke HD MKV faịlụ na achọ na-ekiri ha na Apple TV, ị nwere iji tọghata ha ka ha Apple TV enyi na enyi formats mbụ. Iji mee nke a, a dị mfe na onye ọrụ-enyi na enyi ngwá ọrụ Video Ntụgharị ukwuu tụrụ aro. Ọ na atụmatụ àjà ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa ọsọ (6X ngwa ngwa akakabarede) na 1: 1 àgwà ruru mmepụta. Ọzọkwa, ọ na-enye kachasị preset dabara Apple TV. Soro ntuziaka n'okpuru na mezue MKV ka Apple TV akakabarede na Windows (Windows 10 gụnyere) ọsọ ọsọ na mfe.
Cheta na: abụọ nsụgharị dị: Video Ntụgharị (na-akwado Windows 8Windows 8/7 / XP / Vista) na Video Ntụgharị maka Mac (na-akwado Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6). Ha nwere otu atụmatụ. N'okpuru ebe ndu ewe Windows Version screenshot.
Nzọụkwụ 1: Tinye MKV faịlụ ka a MKV ka Apple TV Ntụgharị
Ị nwere ike Ibu Ibu MKV faịlụ a usoro site na ịpị "tọghata" "Tinye faịlụ" aka ịchọta gị ebe faịlụ ma ọ bụ nanị ịdọrọ na dobe gị MKV videos ka isi interface. Ọ bụrụ na ị nwere di na nwunye nke MKV faịlụ, Ibu Ibu ha ọnụ ịzọpụta oge ma na-ebelata gị akakabarede. Mgbe importing ịga nke ọma, ha ga-egosi dị ka thumbnails. Ị nwere ike idozi ndepụta iji, ekenye mmepụta faịlụ aha na ịhụchalụ videos na nri Michael ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Họrọ preset Apple TV si ouput format ndepụta
Pịa oyiyi na akara ngosi na n'akụkụ aka nri nke isi interface imeghe mmepụta format ndepụta. Họrọ preset "Apple TV" ma ọ bụ "Apple TV HD" site na "Apple ngwaọrụ" (ndị kachasị presets-emekarị arụ ọrụ dị ukwuu).
Atụmatụ: ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-egwu converted faịlụ na Apple TV3, ị nwere ike họrọ M4V si "Format"> "Video" wee pịa "" Mwube "ka ịhazie ntọala ka ndị a: Video (codec: H.264; Mkpebi : 1920 * 1080; ụba Rate: 24 fps; Bit ọnụego: elu uru); Audio (Codec: AAC; ọwa: 2 Channels stereo; sample Rate 44100Hz; Bit ọnụego: elu uru).
Nzọụkwụ 3: Malite MKV ka Apple TV akakabarede
Mgbe ị na-afọ ojuju, pịa tọghatara button na-amalite MKV ka TV akakabarede. Nke a na usoro dị nnọọ oru oma na akakabarede na ọganihu mmanya ga-egosi na oge fọdụrụ.
Ugbu a gị niile MKV faịlụ nwere ike na-egwuri na Apple TV were were. Great Job! Download n'okpuru video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado) na-enweta hassle-free akakabarede!
Lee a zuru ezu video nkuzi:
Olee otú iji belata hà MKV
Olee otú iji tọghata AVI ka Apple TV
Olee otú iji hazie Android égwu
iPhone: Olee otú Idozi White ihuenyo nke Ọnwụ
Top 5 Apple TV Troubleshootings ka dozie Common Issues
Olee otú Wụnye ngwa ọdịnala na HTC Ọchịchọ
> Resource> égwu> Olee otú iji Play MKV Files na Apple TV na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)